वर्षा राउत, नायिका तथा मोडल - टिटबिट - नारी
वर्षा राउत, नायिका तथा मोडल
विज्ञापन, म्युजिक भिडियो तथा चलचित्रको कार्यशालामा व्यस्त छु ।
यो क्षेत्रमा आएको कति भयो ?
साढे २ वर्षजति भयो, मैले म्युजिक भिडियोबाट सुरुवात गरेकी हुँ ।
चलचित्रमा नदेखिनुको कारण ?
पहिले पढाइ र परिवारको दबाबका कारण प्रस्ताव स्वीकार गरेकी थिइन । अब छिट्टै चलचित्र लभबर्डमार्फत सशक्त भूमिकामा देखिने तयारीमा छु ।
मोडलिङ र अभिनयबाहेक अरू केमा रुचि छ ?
मीठा के पकाउन आउँछ ?
मैले जे पकाए पनि मीठै हुन्छ । त्यसमा पनि मासुका विभिन्न परिकार त भिन्नै हुन्छन् ।
म घुम्नभन्दा घरमै बढी समय बिताउन रुचाउँछु । चलचित्र हेर्छु, पसल जान्छु र उपन्यासहरू पढ्छु ।
आफू कस्ती युवती हुँ जस्तो लाग्छ ?
प्याम्पर, छिट्टै रिसाइहाल्ने र स–साना कुरामा पनि खुसी भैहाल्ने ।
भगवान्प्रति कत्तिको आस्था छ ?
मनमा आस्था छ तर मन्दिर त्यति धाउँदिन ।
व्रत बस्नुहुन्छ ?
हप्तैपिच्छे त बस्दिन तर तीज र साउने सोमबारको व्रत भने बस्छु ।
कस्तो गेटअपमा हिँड्न रुचाउनुहुन्छ ?
जिन्स र टिसर्टमै हिँड्न मन लाग्छ ।
जिम र स्वीमिड जान्छु ।
सुन्दरताका लागि के गर्नुहुन्छ ?
महिनाको एकपटक फेसियल गराउँछु, मोइस्चराइजर तथा फेसवास प्रयोग गर्छु ।
मनपर्ने फेसन डिजाइनर ?
शुभेच्छा भँडेल ।
मनपर्ने मेकअप आर्टिस्ट ?
म्युजिक भिडियो एवं सर्ट मुभीमै काम गर्न रमाइलो लाग्छ
रितु श्रेष्ठ, मोडल
रितु श्रेष्ठमा सानैदेखि मोडल बन्ने चाहना थियो । त्यसैले उदय सोताङको म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने अफरलाई उनले सहजै स्वीकार गरिन् । त्यसपछि उनी टिभी, पेपर आदिका विज्ञापनमा मोडलका रूपमा देखा परिसकेकी छिन् । रितुले अभिनय गरेको छोटो चलचित्र राजमार्ग प्रदर्शनको क्रममा छ भने उक्त चलचित्र अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिबलमा समेत सहभागी हुने उनी बताउँछिन् । राजमार्गमा उनकै मुख्य भूमिका छ । मोडलिङमा रमाउने रितुको अभिनय यात्रा कस्तो हुने हो त्यो त भविष्यले नै बताउला तर उनी आफूलाई चलचित्रभन्दा म्युजिक भिडियो एवं सर्ट मुभीमै काम गर्न रमाइलो लाग्ने बताउँछिन् । स्वीमिङमा रमाउने रितु प्रेमभावका गीत सुन्न रुचाउँछिन् । निशा अधिकारी तथा विनय श्रेष्ठ उनलाई मन पर्ने सेलिब्रेटी हुन् ।
सुनील रावल, निर्माता
तपाईंको आदर्श ?
मेरी श्रीमती दुर्गेश थापा ।
सुन्दर लाग्ने महिला ?
नम्रता श्रेष्ठ, प्रकृति श्रेष्ठ ।
भविष्य राम्रो देखिएकी नायिका ?
स्वस्तिका खड्का ।
कस्ता युवतीले आकर्षित गर्छन् ?
टिपटप भएर हिँड्ने र आफूलाई अपडेट गरिरहने ।
महिलाहरूको सकारात्मक पक्ष ?
संवेदनशील, भावुक एवं कोमल स्वभाव ।
महिलाहरूको नराम्रो बानी ?
पूरा कुरै नबुझी आवेगमा आएर रिसाइहाल्ने ।
नारीप्रधान चलचित्र पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ कि ?
म नारी–पुरुष दुवैलाई समान रूपमा हेर्ने भएकाले सबैलाई समेटेर युवापुस्ता लक्षित चलचित्र बनाउँछु ।
पुस १०, २०७२ - जाडो मौसममा नायिका रिस्ता अधिकारी